Public Health Concern चिकित्सक संघमा नयाँ नेतृत्व: अध्यक्षमा डा लोचन सहित २८ जना निर्बाचित – Public Health Concern
चिकित्सक संघमा नयाँ नेतृत्व: अध्यक्षमा डा लोचन सहित २८ जना निर्बाचित
डा. नन्दकुमारी गुरुङले ३ हजार ३ सय १६, डा.सञ्जीव तिवारी ३ हजार ४, डा. विपेश आचार्य २ हजार ८ सय ८० मत ल्याएर सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी, पेसागत तथा समावेशी समूहकका डा. लिजन महर्जनले सदस्यमा २ हजार ८ सय ७२ मत ल्याई पाचौँ स्थान हासिल गरेका छन्। डा. प्रमोद जोशी २ हजार ७ सय ९६ मत ल्याई सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।हेल्थपोस्ट नेपाल